inona ny USB 3.0 HUB? | Huachuang Electronic
Ny fenitra USB 3.0 naseho tamin'ny 2008 dia nampanantena faingana be dia be ny fihenan'ny data raha oharina amin'ny USB 2.0 teo aloha. Noho ny USB 3.0 dia mifanaraka amin'ny teknolojia teo aloha, ny fitaovana antitra dia mbola afaka ampiasaina amin'ny habaka USB 3.0 vaovao.
Famintinana ny tombony azo amin'ny USB 3.0
10x haingana kokoa noho USB 2.0
Midira mifanaraka amin'ny USB 2.0 fitaovana
Fa maninona no tokony hisy habaka USB 3.0 ampiasaina?
Betsaka ny antony tokony hampiasanao haben'ny USB 3.0. Ny iray amin'ireo antony ireo dia mila mieritreritra ny hoavin'ny teknolojia ianao. Na ho ela na ho aingana, ireo fitaovana famaranana izay manohana ny fenitra USB 2.0 ihany dia tsy ho eo amin'ny tsena. Ity no tena zava-dehibe indrindra rehefa mihevitra fa misy fanavaozana efa natao, izay antsoina hoe USB 3.1 (SuperSpeed ​​+). Mihena ary azo tsinontsinoavina ny USB 2.0 satria ny haben'ny USB 3.0 afaka mitazona ireo fitaovana farany misy ny teknolojia 2.0 koa. Raha novidina ny fitaovana faran-dàlambe vaovao misy fifandraisana USB, matetika dia omena USB 3.0 izy ireo.
Ny habaka USB 3.0 ankehitriny
Raha mividy habe USB 2.0 ianao ary manana fitaovana faran'izay manohana ny USB 3.0, azonao atao ny mampiasa azy ireo, saingy tsy maintsy ataonao izany raha tsy misy tombony hafa kely ny USB 3.0. Tsy misy dikany ara-teknika na ara-toekarena izany. Raha misy hub dia ampidirina ao anaty fotodrafitrasa efa misy, ny fahazoana USB 3.0 habe dia ilaina indrindra.
Hatraiza ny hafaingan'ny famindrana angon-drakitra amin'ny alàlan'ny habaka USB 3.0?
Ny tahan'ny fifindrana amin'ny habaka USB 3.0 dia miankina amin'ny antony maro. Mba hahatratrarana ny hafainganam-pandeha ambony indrindra ho an'ny famindrana angon-drakitra, dia ilaina ny manohana ny fenitra USB 3.0 ny singa sy fitaovana rehetra tafiditra. Ohatra, raha mitondra fiara mafy ivelany ivelany mba hahatratrarana fampisehoana farany mandritra ny fanoratana sy famakiana ny fidirana, ny seranan-tsambo USB eo amin'ny takelaka, ny haben'ny USB ary ny kapila ivelany ivelany dia tsy maintsy natao mazava ho an'ny USB 3.0. Izany dia azo jerena avy amin'ny singa manga ao anatin'ny plug sy USB slot.
Inona no mitranga raha toa ka mampifandray fitaovana USB 2.0 amin'ny habaka USB 3.0 aho?
Raha ny fitsipika, tsy misy ny mety hitranga izay manimba ny haben'ny USB 3.0, ny fitaovana faran'izay na ny main-dàlana. Na izany aza, mila miaina miaraka amin'ny fihenam-bidy lehibe ianao raha toa ka tsy manohana ny USB 3.0 ny iray amin'ireo singa voatonona.
Misy habaka USB 3.0 izay manome fiasa manokana?
Misy ny habaka USB 3.0 toy izany. Ireo dika samihafa samihafa dia misy. Ny sasany manohana ny WLAN, ny hafa dia manana ny mpamaky karatra ary noho izany dia tsy miasa ho singa afovoany fotsiny ho an'ny fifandraisan'ny fitaovana USB, fa koa ho foiben'ny fanaraha-maso hamakiana karatra SD.